1 Beresosɛm 21 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Beresosɛm Nhoma a Edi Kan 21:1-30
Dawid yɛɛ asoɔden kan ɔmanfo no (1-6)
Yehowa twee wɔn aso (7-17)
Dawid sii afɔremuka (18-30)
21 Ɛnna Satan* tuu n’ani sii Israel so, na opiapiaa Dawid sɛ ɔnkan Israelfo.+ 2 Enti Dawid ka kyerɛɛ Yoab+ ne ɔman no mu mpanyimfo sɛ: “Monkɔkan Israelfo mfi Beer-Seba nkosi Dan,+ na mommɛka wɔn dodow nkyerɛ me.” 3 Ɛnna Yoab kae sɛ: “Yehowa mma ne man mmu mmɔ ho 100! Me wura ɔhene, wɔn nyinaa nyɛ wo nkoa anaa? Adɛn nti na me wura pɛ sɛ ɔyɛ saa? Adɛn nti na worebɛma asodi aba Israel so?” 4 Nanso, ɔhene asɛm bunkam Yoab de so, enti Yoab kokyin Israel nyinaa, na ɔsan baa Yerusalem.+ 5 Afei Yoab de nnipa a wɔkan wɔn no dodow brɛɛ Dawid; wonyaa Israel mmarima a wɔde sekan kɔ ɔko 1,100,000, na Yuda nso, wonyaa mmarima a wɔde sekan kɔ ɔko 470,000.+ 6 Lewifo ne Benyaminfo de, wɔankan wɔn anka ho,+ efisɛ ɔhene asɛm no yɛɛ Yoab abufuw.+ 7 Nokware Nyankopɔn no ani annye asɛm no ho koraa, enti ɔtwee Israel aso. 8 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ nokware Nyankopɔn no sɛ: “Ade a mayɛ yi de, mayɛ bɔne+ kɛse. Na afei, mepa wo kyɛw, fa w’akoa bɔne kyɛ no,+ na madi nkwaseasɛm paa.”+ 9 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Gad+ a ɔyɛ ɔdehufo ma Dawid no sɛ: 10 “Kɔ na kɔka kyerɛ Dawid sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni: “Mede nneɛma abiɛsa resi w’anim. Yi mu baako na memfa nyɛ wo.”’” 11 Ɛnna Gad baa Dawid anim bɛka kyerɛɛ no sɛ: “Nea Yehowa aka ni, ‘Yi nea wopɛ: 12 mfe abiɛsa a ɔkɔm+ bɛba, anaa abosome abiɛsa a mo atamfo de bɛpra mo akɔ na wɔn sekan anya mo,+ anaasɛ Yehowa sekan a ɛbɛba mo so nnansa ama Yehowa bɔfo de ɔsɛe aba+ Israel asaase nyinaa so, kyerɛ sɛ, nsanyare a edi awu a ɛbɛba asaase no so.’+ Afei dwen ho na ma me mmuae nkɔma nea ɔsomaa me no.” 13 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ Gad sɛ: “Asɛm yi ama mabotow paa. Mesrɛ wo, mma onipa nntwe m’aso,*+ ma Yehowa mmom ntwe m’aso, efisɛ ne mmɔborɔhunu dɔɔso pii.”+ 14 Enti Yehowa de nsanyare a edi awu+ baa Israel maa Israelfo 70,000 wuwui.+ 15 Afei nso, nokware Nyankopɔn no somaa ɔbɔfo kɔɔ Yerusalem sɛ onkokunkum ɛhɔfo. Bere a Yehowa hui sɛ ɔrebefi ase no, mmusu a ɛreba no yɛɛ no mmɔbɔ,*+ enti ɔka kyerɛɛ ɔbɔfo a wɔayi no sɛ onkunkum ɛhɔfo no sɛ: “Ayɛ yiye!+ Fa wo nsa to hɔ.” Saa bere no, na Yehowa bɔfo no gyina Yebusini+ Ornan awiporowbea+ no nkyɛn. 16 Dawid maa n’ani so, na ohuu Yehowa bɔfo no sɛ ogyina ɔsoro ne asaase ntam atwe sekan akura+ ne nsam na ɔde akyerɛ Yerusalem so. Saa bere no, na Dawid ne mpanyimfo no furafura awerɛhow ntama,*+ na ntɛm ara na wogyaa wɔn ho hwee hɔ de wɔn anim butubutuw fam.+ 17 Dawid ka kyerɛɛ nokware Nyankopɔn no sɛ: “Ɛnyɛ me mmom na mekae sɛ wɔnkan ɔman no? Me na mafom na mayɛ bɔne;+ nguan yi de, dɛn na wɔayɛ? O Yehowa me Nyankopɔn, mesrɛ wo, me mmom na teɛ wo nsa wɔ me so; me ne me papa fi. Wo man de, mfa ɔhaw yi mma wɔn so.”+ 18 Ɛnna Yehowa bɔfo ka kyerɛɛ Gad+ sɛ ɔnka nkyerɛ Dawid sɛ onkosi afɔremuka mma Yehowa wɔ Yebusini+ Ornan awiporowbea hɔ. 19 Enti Dawid tiee asɛm a Gad kae wɔ Yehowa din mu no, na ɔkɔe. 20 Saa bere no, na Ornan reporow hwiit; otwaa n’ani no, ohuu ɔbɔfo no, na ne mma baanan a wɔka ne ho no kohintawee. 21 Bere a Dawid kɔtoo Ornan no, ɔmaa n’ani so huu Dawid, na ntɛm ara na Ornan fii awiporowbea hɔ, na ɔde n’anim kobutuw fam wɔ Dawid anim. 22 Dawid ka kyerɛɛ Ornan sɛ: “Tɔn awiporowbea no ma me* na minsi afɔremuka wɔ hɔ mma Yehowa. Ka ne bo nyinaa kyerɛ me ma mintua ka na mmusu no mfi ɔman no so.”+ 23 Ɛnna Ornan ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Mede kyɛ wo; ma me wura ɔhene mfa nyɛ nea ɔpɛ biara.* Hwɛ, mɛma wo anantwi a wode bɛbɔ ɔhyew afɔre, awiporow ade+ a wode bɛsɔ gya, ne hwiit a wode bɛbɔ aduan afɔre. Mede ne nyinaa ma wo.” 24 Nanso, Ɔhene Dawid ka kyerɛɛ Ornan sɛ: “Daabi, mɛtɔ atua ho ka nyinaa, na meremfa nea ɛyɛ wo de nkɔbɔ ɔhyew afɔre mma Yehowa a merentua hwee.”+ 25 Enti Dawid karii sika kɔkɔɔ nnwetɛbona* 600 maa Ornan de tɔɔ asaase no. 26 Ɛnna Dawid sii afɔremuka+ wɔ hɔ maa Yehowa, na ɔbɔɔ ɔhyew afɔre ne asomdwoe afɔre wɔ so. Osu frɛɛ Yehowa na ogyee no so, na ɔtɔɔ ogya+ fi soro beguu ɔhyew afɔremuka no so ma ɛhyew afɔrebɔde no. 27 Afei Yehowa kasa kyerɛɛ ɔbɔfo no+ ma ɔsan de ne sekan no hyɛɛ ne bɔha* mu. 28 Bere a Dawid hui sɛ Yehowa atie no wɔ Yebusini Ornan awiporowbea hɔ no, ɔkɔɔ so bɔɔ afɔre wɔ hɔ. 29 Yehowa ntamadan a Mose yɛe wɔ sare so no ne afɔremuka a na wɔbɔ ɔhyew afɔre wɔ so no de, saa bere no, na ɛwɔ sorɔnsorɔmmea* a ɛwɔ Gibeon+ no. 30 Nanso na Dawid ntumi nkɔɔ hɔ nkobisaa Onyankopɔn hɔ biribi, efisɛ na osuro Yehowa bɔfo no sekan no.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “ɔsɔretiafo bi.”
^ Anaa “mma mennhwe onipa nsam.”
^ Anaa “awerɛhow.”
^ Nt., “Fa awiporowbea no ma me.”
^ Nt., “nea eye wɔ n’ani so.”
1 Beresosɛm 21